ပုဂ္ဂလိကကဏ္ sector သည်ကုန်စည်နှင့်ခရီးသည်တင်လှည်းများထုတ်လုပ်ရန်လည်းလိုအပ်သည် ယာဉ်များ - ဝန်ဆောင်မှု | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာရထားလမ်းပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကုန်တင်နှင့်ခရီးသည်တင်လှည်း၏အစုံကိုလည်းထုတ်လုပ်သင့်ပါတယ် | မီးရထားယာဉ်များ
22 / 11 / 2012 ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
ထိုသို့ကျနော်တို့ကအနည်းဆုံး4တထောင်ယူနစ်, အလှည်းကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် sub-စက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပါလိမ့်မယ်ဆင်ခြင်သောအခါအမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားကုန်တင်ကားများဘို့လိုအပ်ကြောင်းပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ့်သည်ထင်ရှားလျှင်မီးရထားကဏ္ဍ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝေစုအတွက်တူရကီ 2% ခရီးသည်ဝေစုအတွက်ပြည်တွင်းကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ရှယ်ယာ 60% ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ် ဒါဟာကွယ်စွမ်းရည်ရောက်ရှိဖို့သင့်ပါတယ်။ ဤလိုအပ်ချက်များအတွက်အများပိုင်ဝယ်ယူရေးအတွက်နည်းပညာလွှဲပြောင်းနှင့်အဓိကအရေးပါမှု၏ဌာနေထုတ်လုပ်မှုနှုန်းအတွက်ဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေါ်ရထားပို့ဆောင်ရေးစက်မှုဝန်ကြီး '' လမ်း, လမ်းရထား, မြေအောက်ရထား, အလင်းရထားလမ်း, တစ်လိုင်းပြေးရထား, မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားအစုံနှင့် Developing ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်တွင်ဝန်ကြီးဌာနပို့ဆောင်ရေးပစ်မှတ် 2023 ၏စာအုပ်။ တိုင်းရင်းသားနည်းပညာအကြောင်းအရာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လုပ်ငန်းရှင်များဖို့ 50% '' မသင်မနေရဖြစ်လိမ့်မည် 'ဟုဆိုအပ်၏။
စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းတူရကီရဲ့ပန်းတိုင်များရှိသည်ဖို့ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချက်အမှုကိုပြုရပါမည်။ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းတောင်းဆိုစရာမလိုပေအဆိုပါအကဲဖြတ်အဆိုအရဝယ်လိုအားစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အားဖွငျ့ဖျြောရပါမည်။ ပြည်သူ့ဝယ်ယူရေးဒီဇိုင်းနည်းပညာလွှဲပြောင်းနှင့်ဒေသခံထုတ်လုပ်မှုအချိုး 50% အပေါ် fit ရမည်ဖြစ်သည်။ , နောက်ဆုံးသောရှစ်နှစ်လက်ရှိ installed စွမ်းရည် activated ရပါမည်တိုးမြှင့်ဖို့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရထားလမ်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီကြီးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို save လုပ်ပါ။ အသစ်က R & D ဟာရထားလမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရန်ပုံငွေနှင့်ဥပဒေသစ်များ၏နိဒါန်း၏ဖန်တီးမှုအားပေးသင့်ပါတယ်။ GCC ရထားလမ်းကဏ္ဍတွင်ဝယ်ယူရေးဥပဒေပြဌာန်းဘို့ဤအယူအဆမှအဆင်ပြေအောင်ရပါမည်။ အဆိုပါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခကြေးငွေများဖြန့်ဖြူးသည်အထိအထက်တွင်ပစ်မှတ် 2023 ဖမ်းဆီးဖို့စုစုပေါင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစွမ်းရည်၏ Sub-ကဏ္ဍပုံမှန်ပြည်နယ်မှယူဆောင်ခံရဖို့ရှိပါတယ်။
ရထားလမ်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ၏မရှိခြင်း၏ရထားလမ်းမော်တော်ယာဉ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်, R & D လှုပ်ရှားမှုများအရေးကြီးဆုံးအရင်းအမြစ်တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်သည့်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ အသစ်သောနည်းပညာတွေထက်အသုံးများနည်းပညာကလေးမွေးစားခြင်းမကြာသေးမီနှစ်အထိရထားလမ်း၏ကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး၏လျစ်လျူရှု, ပစ္စုပ္ပန်ကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းမှုမှဦးဆောင်နှင့်အသစ်နည်းပညာများနှင့်အတူအနိုင်ရအခွင့်အလမ်းများကိုအကဲဖြတ်လို့မရပါ။ မျှော်လင့်ရသည်ရထားလမ်းကဏ္ဍ၏လွတ်လပ် ပတ်သက်. မကြာသေးမီဥပဒေပြဌာန်းအတွက်မီးရထားကဏ္ဍထွက်ခွာပြီးနောက်ကအနာဂတ်၌ကြီးသောခုန်အားဖြင့်ကြီးထွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ကျန်းမာတိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဒီနည်းပညာ၏, ထိုရထားလမ်းကဏ္ဍတွင်ထောက်ပံ့တစ်ခုလုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အထူးသဖြင့်ရထားလမ်းလှည်းကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းမှသင့်လျော်တဲ့ထုံးစံ၌ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းဖို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် ပတ်သက်. ကိုရောက်စေဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလိမ့်မည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားအခြေခံအဆောက်အအုံန်ဆောင်မှုများ၏အရေးအပါဆုံးလိုအပ်ချက်နှင့် input ကိုတစ်ဦးအပြိုင်အဆိုင်စျေးကွက်အတွက်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအားဖြင့်တင်ပြချက်ပေါ်အခြေခံပြီးမည်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများထုတ်လုပ်သည့်အခါလာမည့်ကာလ, ပြီးသားအရေးတကြီးသူ့ဟာသူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်တပ်မက်လိုချင်သောအရွယ်အစားဖို့ပေးပို့အတွက်အနာဂတ်ရထားလမ်းကဏ္ဍတွင်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုပွငျဆငျသငျ့သညျ။ စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အရင်းအမြစ်များကိုနှင့်တွေ့ဆုံရန်မရှိမဖြစ်ပါလိမ့်မည်အရှိန်အဟုန်မြှင့်မှသကဲ့သို့မီးရထားကဏ္ဍသောကြောင့်တိုင်းပြည်၏အခြေခံအဆောက်အအုံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့် restructured ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဥပဒေထိန်းသိမ်းရေးအပြိုင်အဆိုင်စျေးကွက်ကဏ္ဍများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဘူး, ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဘဏ္ဍာရေးနှင့်စီးပွားရေးအခွက်တဆယ်ကနေအမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိအသုံးပြုသွားမည်လိမ့်မည်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်. စုစုပေါင်း 1.000 ယူနစ် / တစ်နှစ်အပါအဝင်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏တူရကီရဲ့ရထားလမ်းကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်း installed စွမ်းရည်, ညီမျှခရီးသည်တင်ကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးအကောင်းမြင်ခန့်မှန်းချက်နှင့်အတူ 75% ဖြစ်စဉ်းစားတိုင်းပြည်၏ကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်အသုံးချမှုနှုန်း 750 ယူနစ် / တစ်နှစ်အထက်ထည့်သွင်းစွမ်းရည်နှင့်အတူအများပြည်သူကဏ္ဍထိရောက်မှုပါလိမ့်မယ်လျှင်။ ထိုကဲ့သို့သောအမှု၌အတွင်းရထားလမ်းကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းပင်တစ်ဝက်စျေးကွက်ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်လို့မရပါဘူး။ အတိုချုပ်, နှစ်ဦးစလုံးဟာပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်စျေးကွက်ဝယ်လိုအားအဖြစ်နည်းပညာဆိုင်ရာဖြည့်ဆည်းမပေးနိုငျသညျ။ အခြားတစ်ဖက် 2023 တစ်နှစ်ပစ်မှတ်ဟောကိန်းများအပေါ်အခြေခံပြီး, စုစုပေါင်းအရေအတွက်မြို့ပြရထားလမ်းမော်တော်ယာဉ် 5000 ရန်လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ။ အဆိုပါခရီးသည်တင်မီးရထားမော်တော်ယာဉ်များနှင့်လမ်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုပထမဦးဆုံးဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကအဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာထုတ်ကုန်တွေနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်ကြသည်။ Tools များတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလိုအပ်နှင့်အများဆုံးချွေလမ်းတွေ့ဆုံရန်; အဆင့်မြင့်နည်းပညာများနှင့်အတူတကွကုန်ထုတ်လုပ်မှု concept ကိုလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်စျေးကွက်ခွဲဝေမှု; အဆိုပါရထားလမ်းစနစ်ကကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာတည်ဆောက်နိုင်စွမ်းရရှိမှုကြောင့်ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးယင်းအရည်အချင်းပြည့်မီပုဂ္ဂိုလ်များကတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
တူရကီအတွက်ရထားလမ်းကားထုတ်လုပ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းပြည်နယ်၏လက်၌အားလုံးနီးပါးရှိပါတယ်။ တိုင်းပြည်အဖြစ်ဆက်လက်၏အဖြစ်တစ်နှစ် TCDD အခြားလူထုအဖွဲ့အစည်းများ၏ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်များနှင့် Non-ရထားလမ်းမော်တော်ယာဉ်များမှကုန်ထုတ်လုပ်မှုအမိန့်ထုတ်လုပ်ခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ်စတှငျအခမဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုအောက်မှာ competitive- နှင့်အတူပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားစျေးကွက်, ရထားလမ်းကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် operating, ထုတ်လုပ်မှု၏အရည်အသွေးကိုဒီနေ့ရဲ့လျင်မြန်စွာနည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေနဲ့အတူအရှိန်အဟုန်စောင့်ရှောက်နိုင်, စရိတ်နှင့်အပြီး-ရောင်းအားန်ဆောင်မှုကိုအခြားထုတ်လုပ်သူများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မထိရောက်တဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစနစ်အားရှိသည်, သက်ရောက်မှုအဆောက်အဦများ၏အခမဲ့ခံယူရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လှည်းကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းသစ်ကစားသမားများ၏ entry ကိုဦးတည်သွားစေပါလိမ့်မယ်နှင့်တစ်ဦးအပြိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍများတွင်ထည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆင်ပြေလုံခြုံအစာရှောင်ခြင်း, ခေတ်မီနည်းပညာနှင့်စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီအမျိုးသားစီးပွားရေးမှအများဆုံးအလှူငွေပေး, ငါတို့တိုင်းပြည်ပြင်ပမှာအပေါ်မှီခိုထွက်ခွာရထားလမ်းမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ, ပြုပြင်ရေးနှင့်အလုံးစုံစစ်ဆေးပြုပြင်ဖို့များအတွက်ကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်း, ခရီးသည်နှင့်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးပို့ဆောင်ရေးအတွက် operating ယင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမစ်ရှင်, အရည်အသွေးကိုအဖြစ်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ မီးရထားယာဉ်များကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် operating ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေရဲ့ရူပါရုံကို, အရာသညျလူသားတို့လိုအပ်ချက်များနှင့်ဖွံ့ဖြိုးကြောင်းအဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်အတူလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထုတ်လုပ်သောအရာခရီးသည် / ကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, နားမထောင်, ရောင်းချ, စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စံအဆုံးအဖြတ်တစ်ခုတက်ကြွကုမ္ပဏီရှိသင့်ပါတယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်တင်နှင့်ခရီးသည်တင်ရထားလမ်းနှင့်အညီခေတ်မီနည်းပညာနှင့်အတူရထားလမ်း၏အနာဂတ်နှင့်ထုတ်လုပ်သောဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအလွန်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်သည့်မျိုးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
တူရကီယနေ့အတွက် "ရထားလမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်များမှာ ... "
အရင်းအမြစ်: ငါ www.lojistikhatti.co
တင်ဒါကြေငြာချက် - လှည်းကြော်ငြာမျက်နှာပြင်တွင် ၀ တ်ဆင်ကြော်ငြာခြင်းကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြုတ်တပ်ခြင်း…
တူရကီငါ၏အfirmasıda CN တရုတ်မြန်နှုန်းမြင့်ရှင်းလင်းကြလိမ့်မည်နည်း |6အပိုင်းပိုင်းအရမ်းလ
Isparta, Burdur ရထားလမ်းကုန်တင်အာကာသယာဉ်ပေါ်တွင်ခရီးသည်သယ်ဆောင်မဟုတ်လော
မြန်နှုန်းမြင့်ရထား set ကို